တပ်မတော်ကို မထိခိုက်အောင် ဟောပြောဖို့ ပါတီတွေကို သတိပေးချက်ထုတ်
နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးမှာ ဇူလိုင်လ ၂ ရက်နေ့က ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးတင်အေးနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ ၆၅ ပါတီတို့ တွေ့ဆုံစဉ်
အစိုးရပိုင်ရေဒီယိုနဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားကနေ ထုတ်လွှင့်မယ့် နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ ဟောပြောချက်တွေမှာ တပ်မတော်ကို ဂုဏ်သိက္ခာထိခိုက်စေမယ့် အပြောအဆိုတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လိုက်နာမှုမရှိတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ မသုံးနှုန်းဖို့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က သတိပေးကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့ လာမယ့် စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ကနေ နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့အထိ ၂ လကြာ ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက် အစိုးရပိုင် ရေဒီယိုနဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားတွေမှာ အလှည့် ကျ ဟောပြောခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးပါတီတွေဘက်က ဟောပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေကို စာရေးသားပြီး ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက် ပွဲကော်မရှင်ထံ တင်ပြရမှာဖြစ်သလို ကော်မရှင်က ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး ခွင့်ပြုပေးသွားမှာဖြစ် တယ်လို့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
နိုင်ငံရေးပါတီက ခေါင်းဆောင်တွေ ဟောပြောမယ့်စာမူကို ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက လက်မခံဘူးဆိုရင် ပယ်ချမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပါတီအောင်နိုင်ရေးအတွက် ၁၅ မိနစ်စာ ဟောပြောခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပြီး ဒါကို အစိုးရ ပိုင်ရေဒီယိုနဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားကနေ နှစ်ကြိမ် ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်သလို နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာမှာ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ တစ်ကြိမ်ဖော်ပြပေးသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အပေါ် နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ သဘောထားအမြင်တွေကို RFA သတင်းထောက် မဝေမာထွန်း စုစည်းတင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
If you do not want to be blamed tamadaw must stay aside from politic because political criticism go together along with politic.Tin Aye needs to study political science.
နိုင်ငံရေးဘာသာရပ်ကိုတကယ်လေ့လာရမှာ အခု အမည်မဖော်လိုသူ ၊ရန်ကုန်ဆိုသူ ဆိုတဲ့နွားပဲ၊ နိုင်ငံရေးဆိုတာ အားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အရေး၊ ပါဝင်ပုံစံသာ ကွာတာ။ မြန်မာနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်မှာ စစ်တပ်အပါအဝင် ပြည်သူအားလုံး ဆိုးမွေ ကို ခံရတာချည်းပဲ။အခုလို အမည်မဖော်လိုသူလိုနွားတွေကဆဲနေသမျှ စစ်တပ်က ဆက်ရှိနေမှာပဲ၊ဆဲတာအဖြေ မဟုတ်ဖူး။
Sep 02, 2015 11:26 PM
ခပ္ ညံ့ညံ့ နဲ႕ ခပ္ မုိက္မုိက္ အစိုးရ
တိုင်းပြည်ကို တရုတ် မှာ အပေါင်ထား
တရုပ်ကို ပထွှေးတော် - လူတော်တွေ အနေခက်
ပြည်ပကိုထွက် - ခရိုနီ ယောက်ဖယိမ်း
လယ်ယာတွှေသိမ်း - လယ်သမားလယ်မရှိ
သနားစရာအတိ - ထုတ်လုပ်မှု့ လက်ဗလာ
ရှိသမျှ ထုတ်ရောင်း - မြန်မာပြည် အထည်ကြီးပျက်
ကျူးကျော် တရုတ်နိုင်ငံသားက တရားမဝင် သစ်ခိုးထုတ်
ဝမ်ပေါင် တရုတ် က ဗမာပြည်ကို စော်ကားချင်တိုင်းစော်ကား
တရုတ် ကို အ သေ ကြောက် တော့ ဦးပိုင်က တရုတ်ကျွန် ဖြစ်နေပြီ
ဘိန်းဖြူရာဇာတရုတ်ခရိုနီက မြန်မာပြည်ကို စီးပွားရေး ကြိုးကိုင် နေပါပြီ
နှစ်သုံးဆယ် မခံ - ခွက်ခွက်လန် မွှဲ
တပ်မတော်ကို မထိခိုက်အောင် ဟောပြော၊ပါတဲ့
Aug 29, 2015 08:10 PM
အစိုးရချည်းပြောမနေနဲ့ တရုပ်နယ်စပ်နဲ့ထိစပ်တဲ့တလျှောက်ရှိ ကေအိုင်အေကစလို့ ဝလက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်း သားအားလုံးလည်း တရုတ်ကိုရှိသမျှအပေါင်ပေးရောင်းစားနေတာ၊ လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားခရိုနီတွေပဲ။ အတူတူပဲ။
Sep 02, 2015 01:48 AM
STOP naing-gan-taw and tap-ma-taw.
these2elements are just working for the man behind the curtain.
Believe me , there will never be evolution like Suu kyi trying to reform for the country.
Every single person must brave and prepare for the real revolution which can make you taste of the real freedom.
Aug 28, 2015 10:14 PM
A KAUNG SONE F****NG TUT MA DAW
Aug 28, 2015 09:42 PM
လုပ်တုန်းကတော့ မဆင်မခြင် သောက်ရမ်းလုပ်ပြီး ခုမှ အပြောခံရမှာကြောက်နေတယ်။ အဲဒီလို အပြောမခံချင်ရင် နောင် မှာစစ်တပ် ဟာ နိုင်ငံရေးကင်းရှင်းအောင်နေ။
Aug 28, 2015 08:35 PM